MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA EEYAHA YAR YAR - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Eeyaha Yar Yar
Lahaanshaha sawirka LSC Ranch, hoyga 'Feeryahannada Yaryar ee LSC'
Waxaa jira faracyo fara badan oo taraya waxa ay ugu yeeraan Miniature Boxer. Inkasta oo kuwa badan oo sameeya ay leeyihiin nooc u gaar ah oo ku saabsan hiddo-wadaha eeyga, haddana dhammaantood waxay umuuqdaan inay leeyihiin hal ujeedo oo maskaxda ku haysa taasna waa eeyga inuu u ekaado nooc yar oo ka mid ah feeraha saafiga ah. Qaarkood way ka guul badnaayeen kuwa kale isku daygooda.
Bixiyeyaasha qaarkood ayaa si fudud u tarma Boston Terrier oo lagu qasay Boxer-ka . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aaminayo dabeecadda nooc isku dhafan ayaa ah in laga fiiriyo dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha lagu arko nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% nadiif ah ilaa 50% saafi ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaab badan .
Xitaa waxaa jira xaalado xitaa eeyga uusan xitaa ku laheyn Feeryahan gabi ahaanba, tusaale ahaan qaarkood waxay ka gudbayaan Jiirka Jiirka iyagoo wata Pug oo ay ugu yeeraan Mini Boxer. Qaar kale waxay ugu yeeraan iskudhafkan a Boorsooyin .
Tusaale kale waa iskutallaabta Pugga oo leh Toy Fox Terrier. Qaar kale waxay ugu yeeraan iskudhafkan a Toy poxer .
Hase yeeshe kuwa kale ayaa si dhab ah uga shaqeynaya abuurista nooc cusub oo saafi ah, qorista heerka noocyada iyo diiwaangelinta. Eeyadan gaarka ah ayaa la sheegay inay haystaan ​​ugu yaraan 50% Feeryahan. 25% Feeryahannada ayaa loo tixgelin karaa inay yihiin keyd taran sidoo kale, illaa iyo inta loo adeegsanayo inay ku soo baxaan boqolleyda sare. Waxay yeelan karaan ilaa 25% Baabuur , 25% Gorgor , iyo ilaa 50% Boston Terrier , oo aan ka badnayn 50% wadarta Pug, Beagle iyo Boston oo la isku daray. Noocyada kale ayaa sidoo kale laga yaabaa in lagu daro mustaqbalka si loo ballaariyo jimicsiga hidda-wadaha.
Lahaanshaha sawirka LSC Ranch, hoyga 'Feeryahannada Yaryar ee LSC' - Waxaan hadda ka shaqeynayaa qaadashada Guntinta yar yar oo dhan waxaanan isku dayayaa inaan ka dhigo mid dhasho dhab ah oo aan ahayn isugeyn. '
taco terrier eeyo yaryar oo iib ah
sawiro eeyo ey ey buur buur
buur bernese eyda german adhijirka isku dhafka ah eeyo
Sawirro 10 asbuuc jir ah oo reer Jarmal ah ey
papillon jack russell isku dhafan oo iib ah
madow iyo cadaan yar yar oo puky ah oo indho buluug ah leh